'Qoor Qoor ' oo maanta hor tagaya Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
‘Qoor Qoor ’ oo maanta hor tagaya Aqalka Sare
Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa maanta lagu wadaa in uu Aqalka Sare ka jeediyo khudbad uu uga hadlayo xaaladda siyaasadda ee dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye 'Qoor Qoor ' ayaa la filayaa in uu maanta oo Talaada ah hor tago Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kana jeediyo khudbad dhinacyo badan taabaneyso.
Fariin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa lagu war geliyay dhamaan xildhibaanada Aqalka Sare in ay soo xaadiraan fadhiga, waxaana sidoo kale laga yaabaa in xildhibaanada su'aalo weydiiyaan madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa fadhiga Aqalka Sare ka jeedin doono khudbad uu uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashada ee haatan taagan iyo shirarka dowladda iyo madaxda maamulada Muqdisho uga socdo.
Aqalka Sare ayaa metela dowlad goboleedyada oo baarlamaankooda soo doorteen, waxaana xusid mudan in bilihii la soo dhaafay uu aad u yaraa xiriirka wada shaqeynta Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare, taasoo keentay in ka doodista arrimaha Aqalka aanu door ku la heyn.
Horey waxaa Aqalka Sare khudbado ka jeediyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.